समाचार - स्वत: मोल्डिंग मेशीनको शुद्धता कसरी सुधार गर्ने?
स्वचालित मोल्डिंग मेशीनको शुद्धता कसरी सुधार गर्ने?
स्वचालित मोल्डिंग मेशीनको शुद्धता सुधार गर्न क्रम रेखाको सानो वसन्त किनाराहरू व्यवस्थित र राम्ररी प्रशोधन गरिन्छ। मोल्डिंग मेसिन सहज र विश्वसनीयताका साथ चल्दछ, र हाइड्रोलिक प्रणाली सुरक्षित अपरेसन गर्दछ। उपकरण एक मेनिपुलेटर से सुसज्जित छ, जसले उद्यमको उच्च गुणवत्ता र उत्पादन व्यवस्थापन दक्षताका साथै श्रमको आवश्यकता कम गर्दछ। त्यसकारण, मोल्ड डिजाइन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
मोल्डिंग मेसिनसँग धेरै विधिहरू छन्। एक्सट्रुज़न विधि मार्फत, फाउन्ड्री बालुवा जटिल उत्पादनको क्रममा प्रवाह एक्सट्र्यूजन गर्न सजिलो हुन्छ। यी दुई सूचना प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर तिनीहरू आफैंलाई मोल्ड बनाउने राम्रो तरिका होइनन्। चिसो बाकस डिजाइन विधिमा, मोल्डको आकार बालुवा मोल्ड र बाइन्डरहरूको लागत कम गर्न समायोजित गर्न सकिन्छ। बालुवा उत्प्रेरक को मूल्य पनि धेरै उच्च छ। हरियो बालुवाको बन्धन अनुपात अधिक, कोल्ड बक्स मोल्डिंग टेक्नोलोजीको क्षमता कम।
हालको मानक विधि भनेको जटिल आकार र आकारका साथ कास्टि forको लागि चिसो बक्स मोल्डिंग विधिहरू प्रयोग गर्नु हो। थप रूपमा, बालुवा मोल्ड सामग्री कास्टिंग बहु-मिश्र कम्पनी, लिमिटेड उद्यमसँग तुलना गरी। यो कोर-अपरेशन अपरेसनबाट देख्न सकिन्छ कि राल रसायन विज्ञान र नवीन बक्सलेस मोल्डिंग मेशिनहरूको कारण, उच्च-गुणस्तरको कास्टिaकम मूल्यमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले पम्प र रोबोटहरूको उच्च उत्पादन लाइनलाई सुधार गर्दछ, र संख्या कम गर्दछ कास्टिंगहरू कम लागतमा उत्पादन भयो। आवश्यक श्रम मोल्डिंग मेशिन कोल्ड कोर बक्स कोर निर्माण टेक्नोलोजी एक प्रमुख आर्थिक विकास हो।
पोष्ट समय: मार्च ०२-२२१
Sandbox, अर्ध-स्वचालित मोल्डिंग मेशीन, पंच आउट मेशीन, मोल्डिंग कास्टिंग फ्लास्क, फ्लास्क मोल्ड मेसिन, फ्लास्क मोल्डिंग,